Oppo A53, dhamaadka-hoose ee cusub oo leh shaashadda Snapdragon 460 iyo 90 Hz | Androidsis
Oppo A53 wuxuu la yimid shaashadda 'Snapdragon 460 iyo 90 Hz': astaamaha, qiimaha iyo helitaanka mobilka cusub
Dhawaan Oppo waxay soo bandhigtay A53 cusub, Taleefanka casriga ah ee waxqabadka hooseeya oo ka yimaada Snapdragon 460, mid ka mid ah Chipsets-ka ugu raqiisan ee loo yaqaan 'Qualcomm' oo diiradda saaraya bixinta waxqabadka wanaagsan ee heerka ugu hooseeya.
Taleefannada casriga ah, sidaas darteed, waxay leedahay astaamo badan iyo qeexitaanno farsamo oo dhexdhexaad ah, oo ay ku shaqeyneyso ayuu yiri SoC. Si kastaba ha noqotee, taasi kama hor istaageyso inay yeelato muuqaal dhexdhexaad ah oo ay ku qalabeyso shaashad dalool leh. Intaas waxaa sii dheer, qiimaha lacagta ay ku faanto waa mid astaan ​​u ah astaanta, waana sababta ay u tahay mid ka mid ah awoodaha korantadan.
1 Oppo A53: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Oppo A53: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Oppo A53 ayaa lagu bilaabay iyadoo shaashad tiknoolajiyad IPS LCD ah oo 6.53-inji jajab ah, kaas oo ay taageerto jajabyo siibtay iyo garka xoogaa loogu dhawaaqo. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan ku jiri karin akhristaha shaashadda shaashadda, wax sidoo kale qiil looga helayo qiimaha mobilada, oo aan hoos uga hadlayno.
Xallinta guddiga waa HD + 720 x 1.600 pixels, oo u dhiganta noocyadeeda. Sidoo kale, sida runti wax wanaagsan, waxay leedahay heer cusbooneysiin ah 90 Hz, taas oo ka dhigaysa wax walba inay si habsami leh ugu socdaan, ciyaaraha iyo is-dhexgalka iyo codsiyada labadaba.
Ku saabsan waxqabadka mobilada, Chipset-ka siiya awood, sidaan soo sheegnay, waa Snapdragon 460. Midkani waa siddeed udub dhexaad wuxuuna gaari karaa heer cusbooneysiin ah 1.8 GHz.Waxa lagu lammaaneeyey Adreno 610 GPU oo door muhiim ah ka ciyaara orodka sawirada iyo ciyaaraha. Waxa kale oo jira 4 GB LPDDR6x RAM iyo 128 GB oo ah meel lagu kaydiyo gudaha-oo la sii faafin karo iyada oo loo marayo kaarka microSD-, isugeynta xusuusta aan caadiga ahayn ee mobilada hoose, laakiin sidoo kale waxaa jira mid 4 + 64 GB ah.
Batariga awooda siiya Oppo A53 waa 5.000 Mah Mah oo waxay ku timaaddaa taageerada tiknoolajiyada xawaareynta degdegga ah ee 18W iyada oo loo marayo dekedda USB-C. Telefoonku wuxuu la yimaadaa astaamo isku xirnaan kala duwan sida dual 4G VoLTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 awood hoose, GPS + A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS, USB-C, iyo 3.5mm Jack jack.
New Oppo A53, casriga casriga ah ee loo yaqaan 'Snapdragon 460' iyo '90 Hz screen'
Qalabka ayaa leh kamarad hore oo 16-megapixel ah oo leh f / 2.0 aperture, kaas oo ku yaal daloolka daloolka. Dhinaca kale, daboolka dambe ee taleefanka ayaa leh qaab kamarad qaab-qaabeed leh oo leh kamarad weyn oo 16-megapixel ah, lens-ka weyn ee 2-megapixel iyo dareeraha qoto dheer ee 2-megapixel, si loogu bixiyo saddax sawir sawir leh . ee ah iftiinka LED-ka iyo akhristaha faraha oo si iskiis ah ugu yaal.
Android 10 Waa nidaamka qalliinka ee horay loogu sii rakibay taleefanka casriga ah, laakiin aan lahayn iyada oo aan lahayn ColorOS 7.2 oo ah lakabka shirkadda u gaarka ah.
MUUQAAL 6.53-inji HD + IPS LCD leh 720 x 1.600 pixels
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz max.
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 64/128 GB lagu ballaarin karo kaarka microSD
KAAMARKA DAR 16MP Main + 2MP Bokeh + 2MP Macro
CAMERA HORE 16 Xildhibaan (f / 2.0)
BATARY 5.000 Mah Mah oo leh 18 W oo degdeg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 hoosta ColorOS 7.2
Isku xirnaanta Wi-Fi / Bluetooth / GPS / 4G LTE
MUUQAALO KALE Sawirka faraha gadaal / Aqoonsiga wajiga / USB-C
Qiyaasaha iyo Miisaanka 166.5 x 77.3 x 8.5 mm iyo 193 garaam
Labada nooc ee xusuusta ee Oppo A53, oo kala ah 4 + 64 GB iyo 6 + 128 GB, ayaa horey looga sii daayay Hindiya. Kala duwanaanshahan, siday u kala horreeyaan, waxaa lagu qiimeeyaa Rs 12.990 iyo 15.490 Rs, oo u dhiganta qiyaastii 148 iyo 176 euro, oo u dhiganta.
Taleefanka waxaa lagu soo bandhigay laba nooc oo midab leh: midab madow iyo midab cad / buluug ah. Horeba ayaa looga heli karaa FlipKart waana in dhawaan la iibiyaa adduunka, inkasta oo shirkadda Shiinaha aysan wali shaaca ka qaadin wax ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Oppo A53 wuxuu la yimid shaashadda 'Snapdragon 460 iyo 90 Hz': astaamaha, qiimaha iyo helitaanka mobilka cusub
Samsung Galaxy M51 ayaa la kashifay: Naqshaddiisa iyo Astaamaheeda ayaa soo shaac baxay
Bakaylaha BangBang wuxuu kaa dhigayaa bakayle ugu awoodda badan a la Archero